Jona 4, 2011 amin'ny tolotra 8 Comments
Na iza na iza ny lohataona maminavina izay mijoro ho?
Izany fanafahana tonga ao somary tara eo amin'ny fandaharam-potoana. Fa efa namaky izany ny 'andro Download firaketana amin'ny alalan'ny niampita ny 500 marika.
Fanafahana izany na dia kely eo amin'ny natiora no mahafinaritra sasany fanampiny.
Voalohany, ny Default teny teo amin'ny Transposh izao overrides ny olona izay tsara amin'ny WP_LANG tsy miova, izany dia mamela ny WordPress Mu fametrahana izay toerana rehetra azo mitantana amin'ny fiteny samy hafa eo amin'ny backend. Ny endri-javatra izay azon'ny farany mamela ny ankizy mba manana ny bilaoginy manokana amin'ny teny dia afaka mitantana.
Efa nanampy ny TP shortcode izay manome fahafahana ny Output teny transposh ankehitriny, na dia mety tsy Toa be, fanampiny kely izany mamela maneho sary samihafa ho an'ny fiteny samihafa, dia afaka mamaky momba izany eto.
An koa ny constants vitsivitsy ao amin'ny fehezan-dalàna parser, ankehitriny mamela coders (Tsy mpampiasa) ny manova ny fitondran-tena mba handrava parser andian-teny ao amin'ny fahalalana midadasika, jereo ny tampon'ny ny parser.php ho an'ny tahirin-kevitra.
More fiovana sy ny bibikely no midoboka dia ahitana:
Iframes tafiditra ao anatin'ny pejy dia izao araka ny tokony hiezaka hampiditra teny
Raikitra bibikely amin'ny fampiasana ny ihany =”ary” parameter ny TP shortcode izay nanao diso detections ny teny loharano bebe kokoa amin'ny parsing
Dikanteny alemà nanampy tamin'ny Jenny Beelens avy professionaltranslation.com
Ankafizo io dikan-, lazao ny namanao izany, donâ € ™ ny milaza ny fahavalonareo na inona na inona, maka hevitra amin'ny mpahay lalàna, raha tena te-ary donâ € ™ ny manadino ny maha zava-dehibe ny fianakavianao.
Sal: Fantatsika momba ny ampitso i Petera Google amin'ny teny API deprecation sy ny plugin dia mbola miasa, antsipirihany ho nandry amin'ny ho avy dikan-.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: 0.7, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress Mu, WordPress plugin
Version 0.7.2 – Ny fahatelo avy
Martsa 1, 2011 amin'ny tolotra 11 Comments
Sambatra ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i faharoa ho an'ny plugin
Isika vao namoaka dikan- 0.7.2 amin'ny bibikely vitsivitsy fixes sy telo Added fandikan-teny ho amin'ny plugin.
Zavatra fandikan-teny amin'ny Marco Rossi
Teny persana amin'ny Sushyant Zavarzadeh
Zavatra teny amin'ny Angel Torregrosa
Roa taona (ary ny andro) izay no lasa hatramin'ny Version 0.0.1 Navoaka ary ny herintaona mahery Version 0.4.3 Navoaka. Tamin'ny ity taona ity isika dia nanana ny 32,000 Azo alaina, raha oharina amin'ny 13,000 tamin'ny taona talohan'ny, ary manana endri-javatra bebe kokoa, ary somary lehibe kokoa ny vokatra.
Te mankalaza anio amin'ny famoahana ny taratasy fanomezam-pahefana fanompoana, fa indrisy fa ho tara izany somary, na izany aza – ny fanoloran-tena ondrilahy 24GB mpizara dia farany ny (fampiantranoana toerana ity) ary tsy ho ela dia ho vonona ny fikotroky. Mijery ny hevitra, soso-kevitra, hatsaram-panahy sy ny zavatra teny mety te-hitoraka anay.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: andro nahaterahan'i, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin